September 9, 2021 - Achawlaymyar
အရက်မူးပြီး ဝက်နဲ့ရန်ဖြစ်ရာမှ ငယ်ပါဝက်အကိုက်ခံရပြီး သေဆုံးခဲ့သူ
September 9, 2021 by Achawlaymyar
မက္ကဆီကို အနောက်တောင်ပိုင်း San Lucas Ojitlan မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ လယ်သမားတစ်ယောက်ဟာ အရက်အလွန်အကျွံမူးနေစဉ် အိမ်မွေးဝက်နဲ့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အရက်မူးပြီး ဝက်ကို မဟားဒယား တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ ဝက်ရဲ့ ပြင်းထန်လှတဲ့ ကိုက်ချက်နဲ့ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အရက်မူးနေတဲ့အတွက် မိမိခန္ဓာကိုယ် ဟန်ချက်ကိုပင် နိုင်အောင်မထိန်းနိုင်တဲ့ လယ်သမားဟာ လက်ချောင်းသုံးချောင်း အရင် ကိုက်ဖြတ်တာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ ယင်းနောက် ဝှေးစေ့များထွက်သည်အထိ ဝက်က ထပ်မံကိုက်ခဲ့လို့ ရရှိတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပင် သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း မက္ကဆီကိုအခြေစိုက် သတင်းစာတွေက ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ မက္ကဆီကို အခြေစိုက် သတင်းစာ El Debate မှာ ဖော်ပြထားချက်အရ အသက် 60 အရွယ်ကိုတောင် ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ လယ်သမား Miguel Anaya Pablo ဟာ … Read more
ေငြ(၆)သိန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္လုံးစာကၽြန္ခံခဲ႔ရတဲ႔ ကေလး(၂)ေယာက္ရဲ႕ သနားစရာအျဖစ္
ကေလး၂ေယာက္ ျပင္ဦးလြင္ ၾကက္ၿခံတစ္ခုကေန ထြက္ေျပးလာလို႔ လားရွိုးေရာက္လာတယ္။ ဒါကလည္း လူမ်ိဳးခ်င္းတူတဲ့ ျပင္ဦးလြင္က အသိတစ္ေယာက္ အခ်ိတ္အဆက္နဲ႕ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္တယ္။ ၂ေယာက္လုံး အသက္က၁၂ ၁၃၀န္းက်င္ေလာက္ျဖစ္မယ္။ ဇာတိက တန့္ယန္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက႐ြာမွာ။ ဗမာစကား မတတ္ ဘာမတတ္နဲ႕ လားရွိုးေရာက္လာေတာ့ သြားႀကိဳျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ရက္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ေနရပ္ဇာတိကို ျပန္ပို႔ေပးတယ္။ျပသနာက ဘာလဲဆိုေတာ့ကေလးသူငယ္ခိုင္းစားျခင္းပဲ။ မိဘေတြကိုယ္တိုင္က သူတို႔သားသမီးေတြကို တ႐ုတ္အလုပ္ခြင္ထဲပို႔တယ္။ တစ္ႏွစ္စာလုံးး လုပ္လခစာေတြ ႀကိဳထုတ္ပစ္တယ္။ ဒီကေလး ၂ေယာက္ဆို ၁ ေယာက္ကို ၁ႏွစ္ပတ္လုံး ၆သိန္းရတယ္ေျပာတယ္။ သူတို႔လခကေတာ့ မိဘေတြက ထုတ္ယူသြားတယ္။ လခ ႀကိဳထုတ္ထားေတာ့ ဟိုကလည္း ကေလးေတြကို စပယ္ရွယ္ခိုင္းးတယ္။ မလုပ္နိုင္တဲ့ အဆုံး ကေလးေတြ ထြက္ေျပးလာတယ္။ဒီကိစၥမ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္ဆီေရာက္လာတာ ၃ခါထက္မနည္းေတာ့ဘူး။ အခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ အိမ္ျပန္ပို႔တယ္။ အခ်ိဳ႕ကေလးေတြကိုေတာ့ … Read more
ေတာ္လွန္ေရးအေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမကို ေရာက္ရွိေနၿပီး ျပည္သူေတြအတြက္ အနစ္နာခံေနၾကရတဲ့ သူရဲေကာင္းရဲေဘာ္ေတြမွာ ေပးဆပ္မႈေတြေတာ့ တကယ္ကိုအမ်ားအျပားပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကို စြန႔္လႊတ္ၿပီး အားလုံးရဲ႕အနာဂတ္ေတြအတြက္ ယုံၾကည္ရာကို ေလွ်ာက္လွမ္းကာ အားတင္းႀကိဳးစားရင္း တိုက္ပြဲဝင္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတဲ့ နာက်င္မႈေတြထဲမွာ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွာ ႀကိဳးစားတိုက္ဝင္ေနတဲ့အခ်ိန္ မိခင္နဲ႔ အစ္မျဖစ္သူႏွစ္ေယာက္တည္းက်န္ခဲ့တဲ့ ေနအိမ္ကို မီးရႈိ႕ဖ်က္စီးခံလိုက္ရတာေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒလန္ရဲ႕သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ ျပည္ပမွာအလုပ္လုပ္ၿပီး ရွာေဖြထားတဲ့ ေခြၽးနည္းစာ လုပ္အားခေလးေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားခဲ့တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ေနအိမ္တစ္ခုလုံး ျပာက်တဲ့အထိ မီးရႈိ႕ဖ်က္စီးခံလိုက္ရတာေၾကာင့္ PDF လူငယ္ေလးက စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနစရာအိမ္မရွိေတာ့လို႔ ဝမ္းနည္းေနရေပမယ့္ အနစ္နာခံႀကိဳးစားမႈေတြနဲ႔ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြအတြက္ အားတင္းရင္း လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမကေန အေမနဲ႔အစ္မျဖစ္သူကို အားေပးစကားေတြလည္း ေျပာထားပါေသးတယ္..။ ႀကဳံလာသမွ်အခက္အခဲေတြကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ရင္း ေနအိမ္ကိုမီးရႈိ႕ဖ်က္စီးခံလိုက္ရတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးကိုလည္း ​PDF … Read more
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်တော့မယ့် အားကောင်းတဲ့ Typhoon မုန်တိုင်း “ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ အနောက်ဘက် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင်(18W)CONSON အမည်ရTyphoon မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ဦးတည်ရွေလျားနေ” ၉.၉.၂၀၂၁ နံနက် ၁၀ နာရီ ၀၉ မိနစ် အပတ်စဉ်ခန့်မှန်းချက်မှာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့တဲ့အတိုင်းအပြောင်းအလဲမရှိ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ဘက် တောင်တရုတ်ပင်လယ်​ပြင်တွင် (18W)CONSON အမည်ရမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ဦးတည်ရွေလျားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ မုန်တိုင်းအန္တရယ်မရှိပါ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသများကို လေပွေလှိုင်းများအဖြစ်နဲ့မိုးရွာသွန်းနိုင်တာလောက်ပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယခု ဖြစ်ပေါ်နေသော Typhoon မုန်တိုင်းရဲ့အခြေအနေကတော့… JTWCရဲ့ ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆နာရီ၃ဝမိနစ်အချိန်တိုင်းထွာချက်များအရ Center pressureမှာ”1000hpa”ဖြစ်ပြီး အနောက်မြောက်ဘက်ကို၁နာရီ၁ဝမိုင်နှုန်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိရာဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားနေပါတယ်။ အဆိုပါ Typhoon မုန်တိုင်းဟာဆက်လက်အားကောင်းလာကာ နောက်၂ရက်အတွင်း အားအလွန်ကောင်းသော Typhoon မုန်တိုင်းဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့တော့ ကနဦးခန့်မှန်းတွက်ချက်ရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာ ။ Update သတင်းများကို … Read more
မိတ္ကပ္ မပါဘဲအၿမဲလွေနေအာင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ခ်စ္ပါ ကိုယ္လွတာ ကိုယ့္အတြက္ပါ
မိတ္ကပ္ မပါဘဲအၿမဲလွေနေအာင္ မိတ္ကပ္မပါဘဲအၿမဲလွေနခ်င္လား ? (1) မ်က္ခုံးေမႊး မ်က္ေတာင္ေမႊးကို သံလြင္ဆီ(သို႔) Vaseline အၿမဲလိမ္းပါ (2)ႏုတ္ခမ္းကို အဆီအၿမဲလိမ္းေပးပါ (3)မ်က္ႏွာကို တစ္ရက္ႏွစ္ခါသစ္ပါ (4)skin care ပုံမွန္လုပ္ပါ (5)Maskတစ္ပတ္ႏွစ္ႀကိမ္ကပ္ပါ (6)တစ္ရက္ေရ၈ခြက္ေသာက္ပါ (7) အခ်ိန္မွန္မွန္အိပ္ပါ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ခ်စ္ပါ ကိုယ္လွတာ ကိုယ့္အတြက္ပါ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ မ်က္ႏွာေလးၾကည္လင္ဝင္းပေနဖို႔အတြက္ ေရဓာတ္ျပည့္ေနဖို႔ကလည္း အရင္လိုအပ္ပါတယ္။ သဘာဝအတိုင္း က်န္းမာလွပတဲ့ အသားအေရေလးကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေရဓာတ္အျပည့္ျဖည့္ေပးဖို႔ လုံးဝေမ့လို႔မရပါဘူး။ မွန္မွန္ေခ်းခြၽတ္ပါ အသားအေရေလး ဝင္းလက္ေနေစဖို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ ေခ်းခြၽတ္ျခင္းျဖင့္ အသားအေပၚက ဆဲလ္ေသေတြကို ဖယ္ရွားေပးျခင္းပါပဲ။ အစိုဓာတ္ထိန္းသိမ္းပါ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ေခ်းခြၽတ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ၿပီးတိုင္းမွာ အသားအေရၾကမ္းတမ္းၿပီး ေျခာက္ေသြ႕သြားျခင္းမရွိေအာင္ အၿမဲတမ္း Moisturizer ေလးေတြ လူးေပးပါ။ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီၫြတ္စြာ စားသုံးပါ အာဟာရေတြျပည့္ဝတဲ့၊ … Read more
Solar Storm ကြောင့် အင်တာနက်လိုင်းများ လနှင့်ချီ ပြတ်တောက်နိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များက သတိပေး
နေကနေ ကမ္ဘာကို လျှပ်စစ်သံလိုက် စွမ်းအင်ရှိတဲ့ အမှုန်လေးတွေ အမြောက်အများ တချိန်လုံး ကျဆင်းနေပါတယ်။ ဒီအမှုန်လေးတွေကို နေလေပြည် (သို့) နေလေလှိုင်း (Solar Wind) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ Solar Wind မှာ အဓိက ပါဝင်တဲ့ အမှုန်လေးတွေကတော့ အီလက်ထရွန် (Electron)၊ ပရိုတွန် (Proton) နဲ့ အယ်လ်ဖာ အမှုန် (Alpha particles) တွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပုံမှန် ဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာ့ သံလိုက်စက်ကွင်းက ဒီ နေလှိုင်းတွေ ကမ္ဘာ မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ကို ကျရောက်မလာအောင် တားဆီး ကာကွယ်ပေး ထားပါတယ်။ ဒီ နေလှိုင်းအမှုန်လေးတွေက လျှပ်စစ် သံလိုက် စွမ်းအားရှိတာမို့ ကမ္ဘာ့ သံလိုက်စက်ကွင်း တလျှောက် မျောပါပြီး … Read more
သေတတ်သည်_သတိထားပါ ညနေကတောင်ဖြစ်သေးတယ်… တံတွေးခန်းပြီး လူက မိုက်ကနဲပဲ ရေပြေးသောက်လိုက်မှ သက်သာတယ် အယ်နီညိုမှာဒီရောဂါကြောင့်အများ ကြီးသေနိင်ပါတယ်။ Heat Stroke အပူလျှပ်တဲ့ရောဂါပေါ့။ ကျွန်တော်ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ ကားစီးနေရင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပူလာပါတယ်။ ပါးစပ်နှာခေါင်း မျက်စိတွေကအစပေါ့။ ပြီးတော့ဒီလောက်ပူနေတာချွေးမထွက်ဘူး။ ခေါင်းတွေမူးခြေတွေလက်တွေတုန်လာတယ်။ ဖြစ်တာကဥက္ကံမြို့အကျော်ဖလုံရွာနားမှာ။ Expressပေါ်မှာနာရီတွက်ကြည့်မိတယ်။ နောက်မိနစ်၂၀မှတိုက်ကြီးရောက်မယ် ။ရေသန့်ဗူးကိုသောက်ပါတယ်။ မရ။ သောက်ပြီးတာနဲ့ပါးစပ်ထဲမှာတံတွေးမရှိတော့ပါ။ခြောက်ကပ်သွားပါတယ်။ရေလဲကုန်ပြီ။ပေလို့မရတော့။ ကားစပါယ်ယာခေါ်ပြီးဓါတ်ဆားထုပ် ဘယ်သူ့မှာပါလည်းဆိုင်္ပြီးအကူအညီတောင်းပါတယ်။ဓါတ်ဆားနှစ်ထုပ်ရပါတယ်။ ရေဗူးတွေလည်းရပါတယ်။သောက်လိုက်တော့ပါးစပ်မှာတံတွေးပြန်ထွက်လာပါတယ်။ မူးတာမပျောက်နှလုံးခုန်မြန်တာနဲနဲသက်သာပါတယ်။ မူးတာနဲ့ခြေတွေလက်တွေ ကတော့ကပ်နေတုန်းပါ။ တိုက်ကြီးမှာဆင်းပြီးအနီးဆုံးဆေးခန်းကိုကျွန်တော်ပြေးပါတယ်။ ဟိုရောက်တော့ဆရာဝန်ကို Heat Stroke မိတာထင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ သွေးချိန်တော့၅၀/၄၀ကိုကျသွားပါပြီ။ဆရာဝန် မလေးကချက်ချင်းဒရစ်ချိတ်ဆယ်လူပေးပြီပေါ့။ ရှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်။ မဟုတ်ရင်အသက်အန္တရာယ်နီးတယ်တဲ့။ ဒရစ်ချိတ်ပြီးတော့၆၀/၇၀ပြန်တက်လာတယ်။ သတိရှိလို့ပါ။ ပေရင်သေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ချွေးမထွက်ပ ဲတကိုယ်လုံးပူလာမယ် တံတွေးဆုတ်သွားရင် သတိထားပါ။ မရှက်ပါနဲ့။ ရေဖျော်ရည်ဓါတ်ဆားရေသောက်ပါ။ အ ချိန်မဆွဲပါနဲ့။ ရောက်တဲ့နေရာက ကျန်းမာရေးဌာနာမှာ ဒရစ်ချိတ်ပါ။ ဓါတ်ဆားကတော့ နေရာတိုင်း … Read more
NUGအစိုးရရဲ့ DDay ကြော်ငြာမူ့ဟာ အာစီယံကျရူံးခြင်းလို့ မလေးရှားဝန်ကြီးကပြော
NUGအစိုးရရဲ့ DDay ကြော်ငြာမူ့ဟာ အာစီယံကျရူံးခြင်းလို့ မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ် တကယ်တော့ တရုတ် စကစ အာစီယမ် ဇတ်ညွှန်းကို NUGကအလဲထိုးချလိုက်တာပါ တရုတ်ဟာ မြန်မာကိုဆီရီးယားလိုထားချင်ပါတယ် အမြဲလူပ်ခက်နေစေချင်တာပါ အဲ့လိုထားဖို့ဆို စကစမြဲနေဖို့လိုပါတယ် ဒီအတွက် အာစီယမ် ကိုသူလိုရာစေခိုင်းလိုက်သလိုNLDပါတီကို အာရှ ပါတီပေါင်းစုံအစည်းအဝေးဖိတ်လိုက်တာဟာ မြန်မာပြည်တွင်းပဋိပက္ခကို စကစကို လူကျော ဂိုးကျော ဒိုင်ပါအပါပေးကန်ခိုင်းလိုက်တာပါ အမှန်တော့ တရုတ်ခင်းပေးမယ့် နိုင်ငံရေးကျောကိုNLDမလိုက်သင့်ဘူး တရုတ်ဟာသူရော သူ့လူရောအသာမရရင်ကစားလေ့မရှိဘူး စကစကျရူံးရင်တောင် စကစနဲ့နောက်ကွယ်ကချုပ်ထားတဲ့ စာချုပ်တွေအတွက် ချည်နှောင်လာစရာရှိသလို မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဂေါင်းကိုင်နေရာသူ ယူနေပါ့တယ် ဆီရီးယားကိုအလူပ်ထားတာ US ဖြစ်ပြီး အစ္စရေးငြိမ်အောင်ပါ မြန်မာကိုအလူပ်ထားပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးဘက် အာရုံစိုက်မလာအောင်လုပ်လာတာ တရုတ်ပါ ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးဗျူဟာအခင်းအကျင်းဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှသည်အာဖကန်ထိကို နှစ်၂၀ကစားလာပြီး အခုက အင်ဒိုပစ္စဖိတ်ဘက် (အာစီယမ်)ဘက်ကို ရွေ့လာတာကို မင်းအောင်လိူင် … Read more
လက်ရှိလူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ Angel of death လို့နာမည်ကြီး နေတဲ့ စစ်တပ်ထောက်ခံသူ မော်ဒယ် ရွှေရည်ပါဦး ဟာ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ နင်တို့ အမေ့သမီးတွေ ငါ့လောက်ကိတ်လား လို့မေးလိုက်တဲ့ အပေါ် မော်ဒယ် ဖူးပွင့်ခိုင် က ပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင် ရွှေရည်ပါဦး ရဲ့Commentအောက်မှာလဲ သွားရောက် မန့်ထား တာကို တွေ့ရပါတယ်။ မော်ဒယ် ဖူးပွင့်ခိုင် ကလဲ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် အပေါ်မှာ ပြန်လည် တင်ထားပြန်ပါတယ်။ နင်တို့မေအလ သမီး တွေ င့ါလောက်ရော ကိတ်လား လို့မေးလိုက်ပြန်ပါတယ် နောက်ပိုင်းမှာ ရွှေရည်ပါဦး ရဲ့လူမှုကွန်ယက် Comment အောက်တွင်လဲ သွားရောက် စိန်ခေါ်ထားတာ ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် သူ တို့၂ဦး ရဲ့ တိုက်ပွဲဟာ ဘယ်လောက်ထိ … Read more
ထူးဆန်းစွာသရဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ နွား နွားတစ်ကောင်လုံးကို မြောက်တက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သရဲ ထူးဆန်းစွာသရဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ နွား နွားတစ်ကောင်လုံးကို မြောက်တက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သရဲ ထူးဆန်းစွာသရဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ နွား နွားတစ်ကောင်လုံးကို မြောက်တက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သရဲ ထူးဆန်းစွာသရဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ နွား နွားတစ်ကောင်လုံးကို မြောက်တက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သရဲ ထူးဆန်းစွာသရဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ နွား နွားတစ်ကောင်လုံးကို မြောက်တက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သရဲ ထူးဆန်းစွာသရဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ နွား နွားတစ်ကောင်လုံးကို မြောက်တက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သရဲ ထူးဆန်းစွာသရဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ နွား နွားတစ်ကောင်လုံးကို မြောက်တက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သရဲ ထူးဆန်းစွာသရဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ နွား နွားတစ်ကောင်လုံးကို မြောက်တက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သရဲ ထူးဆန်းစွာသရဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ နွား နွားတစ်ကောင်လုံးကို မြောက်တက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သရဲ ထူးဆန်းစွာသရဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ နွား နွားတစ်ကောင်လုံးကို မြောက်တက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သရဲ Credit ဗီဒီယိုၾကည့္ရန္…. ထူးဆန္းစြာသရဲတုိက္ခိုက္ျခင္းကိုခံလုိက္ရတဲ့ ႏြား ႏြားတစ္ေကာင္လံုးကို ေျမာက္တက္သြားေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့သရဲ ထူးဆန္းစြာသရဲတုိက္ခိုက္ျခင္းကိုခံလုိက္ရတဲ့ ႏြား ႏြားတစ္ေကာင္လံုးကို ေျမာက္တက္သြားေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့သရဲ ထူးဆန္းစြာသရဲတုိက္ခိုက္ျခင္းကိုခံလုိက္ရတဲ့ ႏြား ႏြားတစ္ေကာင္လံုးကို ေျမာက္တက္သြားေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့သရဲ ထူးဆန္းစြာသရဲတုိက္ခိုက္ျခင္းကိုခံလုိက္ရတဲ့ … Read more